Shukaansiga apps waxa ay ku sii koraan Spain | Bezzia
Shukaansiga apps waxa ay ku sii koraan Spain
Maria vazquez | 22/06/2022 10:00 | nololeedka
Guud ahaan shukaansi app downloads koray 32% Bilawga sanadkan 2022. Naceybkii laga qabay boggagan ayaa yaraatay, dad badanina waxay codsiyadan u arkaan hab kale oo lagula kulmo qof.
Qaar badan oo ka mid ah boggagan waxay ku shaqeeyaan hoos dhaq-dhaqaaqa degdega ah kaas oo ay kugu filan tahay in aad suulka ka dul marto shaashadda bidix ilaa midig si aad u doorato ballan xiga. Kuwo kale waxay leeyihiin laxanka dabacsan, dooro profiles la xaqiijiyay iyo koox bini'aadam ah oo ka jawaabaya shaashadda gadaasheeda.
Ma ogtahay inaan Isbaanishka nahay saddexaad ee darajada isticmaalka online shukaansi portals iyo codsiyada? Waxa kaliya ee aan ka sare maray Mareykanka iyo Brazil qiimeynta, taas oo noo dhigaysa madaxa Yurub ee isticmaalka shukaansi apps. Laakiin, waa maxay codsiyadan iyo kuwee ugu caansan Spain?
2 Kuwa ugu caansan Spain
El Korodhka Dadka Keliya, Taas oo, sida laga soo xigtay xogta Machadka Qaranka ee Tirakoobka, wuxuu ka kacay 36% 2019 ilaa 40% 2021, waxaana u isticmaalaya suuqa codsiyada raadinta joogtada ah ee jiilka oo uu ku bixin karo adeegyadiisa.
Oo ma aha oo kaliya laga bilaabo niches jiilka, codsiyadani waxay sidoo kale isticmaalaan noocyada kale ee Niches iyadoo loo eegayo danaha, isirrada iyo xitaa diimaha. Maanta waxaa jira codsiyo shukaansi qof walba, inkastoo marka laga tago kuwa ugu caansan waxaan ka heli kartaa la'aanta dadka isticmaala.
Sidaan horeyba u soo sheegnay, qaar badan oo ka mid ah apps-yadan waxay ku shaqeeyaan dhaqdhaqaaqyo degdeg ah oo ay ku filan tahay suulkaaga ka mari shaashadda si aad u doorato ballan xiga. Waxaan ka hadleynaa, tusaale ahaan, codsiyada sida Tinder ama Bumble, taas oo ay tahay haweeneyda inay qaado tallaabada ugu horreysa.
Dhanka kale, nooc kale oo apss ah ayaa iska dhigaya inuu yahay meelo firaaqo iyo saaxiibtinimo badan leh. Kuwaas waxaa guud ahaan loogu talagalay meelo gaar ah, sida xaaladdu tahay, tusaale ahaan, Ourtime, oo diiradda saaraya kuwa ka weyn 50 sano. halkan ka doorashada musharixiinta waxaa la bixiyaa iyadoo loo eegayo xiriirka ka dib markii laga jawaabay su'aalo aad u dhameystiran oo dhammaan profiles waa la xaqiijiyay, taas oo ah in la yiraahdo codsigu wuxuu hubiyaa in qofka ka wakiil ah profile-ka dhijitaalka ah uu u dhigmo qofka ku jira adduunka dhabta ah.
Waxaa jira apss kuwaas oo isticmaalayaashu ay inta badan raadinayaan kulanno caadi ah ama galmo ah iyo kuwa kale oo cilaaqaadka la kala hormarinayo. Ugu caansan, si kastaba ha ahaatee, ka jawaabaan profiles oo dhan, kuwaas oo ka kooban noocyo badan oo isticmaalayaasha.
Kuwa ugu caansan Spain
Edarling iyo Meetic Waxay weli yihiin marinnada loogu booqashada badan yahay Spain. Labaduba waxay ku saleysan yihiin matchmaking si ay u soo jeediyaan lammaanayaasha, kaa caawinaya inaad hesho dad nafsiyan la xiriira oo ku habboon. Waxaan hubaa inaad garan doonto hal-ku-dhegga ugu horreeya ee ah: dalbanaya keli-ahaanta.
Midka labaad, Meetic, waxaa iska leh Kooxda Match Groupka ee xukuma goobta shukaansiga ee leh apps sida Tinder, Hinge, Fish Fish, OK Cupid, Waqtigeena ama Match. Inta u dhaxaysa shootali waa kan ugu caansan, isagoo ka mid ah 3-da barnaamij ee shukaansiga ugu caansan ee wadamada sida US, UK, Germany, France, Spain iyo Italy.
Marka loo eego qiyaaso kala duwan, Kooxda Match Group waxay xisaabisaa in ka badan 56% wadarta shukaansi abka la soo dejiyo, oo ay ku xigto kooxda MagicLab, oo leh bumble iyo badoo, mid kale oo ka mid ah codsiyada shukaansi ugu caansan ee Spain.
Haddii aad rabto in aad la kulanto dadka isku danahaaga ee degaankaaga, samee saaxiibo ama raadso xiriir, codsiyada shukaansiga waa a beddelka dhijitaalka ah kuwa kale ee dhaqanka iyo hababka fool-ka-fool ah ee wax loo qabto. Akhri sharraxaaddooda, saxiix laba ka mid ah oo isku day.
Maskaxda ku hay in dadka sidaan ula kulma ay tahay mid canshuur badan. Waxay qaadataa wakhti in la raadiyo si aad u hesho profiles la mid ah priori, kuwaas oo aan kaliya na soo galaan aragga laakiin waxa ay u sheegaan. Intaa waxaa dheer, marka la helo, had iyo jeer ma laha hadafyo la mid ah annaga. Haddii ujeeddadeennu ay tahay mid gaar ah, waxay dhalin kartaa niyad-jab inaan isla marxaladda si joogto ah u marno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Shukaansiga apps waxa ay ku sii koraan Spain
Jirka ceeryaamo: waxa uu yahay, sida loo isticmaalo iyo wax ka badan